मन्त्रिपरिषद बैठकमा सबैमन्त्री सामु ल्यापटप, प्रमका सल्लाहकारले भने : अबदेखि मन्त्रिपरिषद बैठक कागजविहीन :: Pahilopost.com
आजबाट मन्त्रिपरिषद बैठक कागजविहीन भएको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले फोटो ट्विट गर्दै यसको जानकारी गराएका हुन्।
उनले जारी गरेको फोटोमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु सबैसामु ल्यापटप देखिएको छ। केही अघिमात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री बन्नेले अनिवार्य कम्प्युटर चलाउन जान्नुपर्ने बताएका थिए। साथै सरकारले मन्त्रीहरुलाई म्याकबुक उपलब्ध गराउने जनाएको थियो।
आजबाट मन्त्रिपरिषदको बैठक कागज बिहिन हुँदै -
— Bishnu Rimal (@BishnuRimal)
मन्त्रिपरिषद्काे आकस्मिक बैठक जारी
काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को बैठक वालुवाटारमा सुरु भएको छ। बैठक केही बेरअघि सुरु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सोमवार र बिहीवार बस्ने भएपनि आइतवार बैठक बसेको हो। मन्त्रिपरिपषद्को आकस्मिक बैठक भएको मन्त्रीहरु बताउँछन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी, कोभिड-१९ बारे केही निर्णय हुन सक्ने
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १२ बजेका लागि मन्त्रीपरिषद् बैठक डाकेका छन्। ओलीले १२ बजे बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् डाकेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए। तीन दिन अघिमात्र मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको थियो। आजको मन्त्रिपरिषदको छलफलको विषयबारे भने थापाले केही खुलाएनन्। '१२ बजे बैठक बोलाएको हो। आकस्मिक हो कि
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, लकडाउनबारे के होला?
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीवार मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएका छन्। बैठक बस्ने समय भने यकिन नभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक बस्न लागेको हो। आजको मन्त्रिपरिषद बैठकमा लकडाउनका विषयमा निर्णय हुने बताइए पनि थापाले भने नियमित बैठक भएकाले लकडाउनबारे निर्णय नहुने दावी गरे। 'नियमित
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु
काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएको छ ।प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले ट्वीटर मार्फत् बैठक सुरु भएको जानकारी दिएका हुन् । &nbsp; प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले बालुवाटारमा ...
पहिलो पटक पेपरलेस मन्त्रिपरिषद बैठक, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकाे हातमा म्याकबुक (फोटोफिचर)
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै मन्त्रीका हातमा म्याकबुक
मन्त्रिपरिषद बैठक आजदेखि पेपरलेस !
१० साउन, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठक बिहीबारदेखि कागजको प्रयोग नगरिने भएको छ । बिहीबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रीहरुले कागजको सट्टा ल्यापटप प्रयोग गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले सबै मन्त्रीहरुले ल्यापटप चलाएको फोटो ट्वीटरमा राखेर मन्त्रिपरिषद बैठक बिहीबारदेखि पेपरलेस हुने जानकारी गराएका छन् ।
ओली मन्त्रिपरिद् बन्यो पेपरलेस, मन्त्रीका हातहातमा ल्यापटप, फोटो
काठमाडौं : अब मन्त्रिपरिषद् बैठक विकसित मुलुकमा जस्तै अटोमेसन सिस्टम स्वचालित प्रणालीबाट हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा पेपरलेस अवधारणलार्इ व्यवहारमा लागू गर्न बिहीबारबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्वचालित प्रणालीबाट सुरु हुन लागेको हो। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रीहरूलार्इ अत्याधुनिक र एकै क्षमत...